यति खेर के गर्दै होलान् यो जोडी ? भाइरल जोडीलाई भाईरल बाबाको प्रश्न (भिडियो) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यति खेर के गर्दै होलान् यो जोडी ? भाइरल जोडीलाई भाईरल बाबाको प्रश्न (भिडियो)
काठमाण्डौ- इलामको चुलाचुलीमा भेटिएका हजुरवुवा र नातिनीको जस्तो उमेर अन्तर भएका श्रीमान् श्रीमती पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल जोडीका रुपमा परिचित छन् । चुलाचुली गाउँपालिका ३ का ६७ बर्षीय सिंहप्रसाद लिम्बू र २१ बर्षीया पूजा लिम्बूले विवाह गरेपछि यतिबेला भाइरल बनेका हुन् ।
हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन । उक्त जोडीलाई भाईरल बाबाले धेरै प्रश्नहरु गरेका छन् । अत्यादिक भाइर बनेका जोडी यति बेला के गर्दै होलान् ? यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिरहेको छ ।
यो भिडियो हेर्नुहोला: